UMasipala waseThekwini nekhwelo kubabhali bezincwadi – Sivubela intuthuko Newspaper
UNKZ Sithembile Doncabe wezama-Library kuMasipala waseThekwini.
ABOMTAPO wolwazi kuMasipala waseThekwini banxusa ababhali bezincwadi ukusebenzisana nomasipala ekubhaleni ngomlando waleli dolobha nangezinye izinto ezingamagugu esizwe ukugwema ukuthi abantu bangaxoxelwa ngabantu bakwamanye amazwe ngomlando wedolobha labo.
UNkz Sithembile Doncabe usho kanje ekhuluma emcimbini wabeMpophomo Yolwazi Authors House lapho bebethula khona i-The Book Behind Awards okuwumncintiswano ohlelwe nguNkz Nelly Shozana okungowokuhlonipha ababhali awuhlelwe ngokubambisana noMasipala waseThekwini noMnyango wezamaCiko namaSiko KwaZulu-Natal ophathiswe uNkk Hlengiwe Mavimbela.
Abe-The Book Behind Awards bethule lo mncintiswano e-Ethekwini Community Church (ECC) okuyibandla eliholwa wuMbhishobhi Vusi Dube ozokuba mhlaka 11 September nonyaka endaweni esazomenyezelwa. Lo mncintiwano ungenelwe ngababhali abehlukene baKwaZulu-Natal kwase kuqokwa nezinkampani ezishicilela imisebenzi yabo lapho kuzobhekwa ukuthi iyiphi edla ubhedu kuzona eziqwaqwade zonke emakhanda. Kubuye kwaqokwa nemitapo yolwazi okuzobhekwa ukuthi yimuphi phakathi kwayo oyimvivilithi kubantu baseThekwini. Imitapo yolwazi edlana imilala lapha ngowaseMawoti, owaseGalleria, owasoTongaat Central, owaseReservoir Hills, owaseBayview, owaseDon & Reference, owaseMusgrave nowaseClermont.
UMnu Phila Myeni oyisisebenzi soMnyango wezamaCiko namaSiko KwaZulu-Natal obemele umnyango wakhe uphonsele inselelo ababhali ethi mabasondele emnyangweni wabo ngoba unazo izinhlelo zokulekelela ababhali. Uthe uhlelo abalubhekelela kakhulu olwababhali ababhala ngolwimi lwebele IsiZulu njengoba lubonakala lufadabala. “Ulwimi lwethu lwebele luyabaleka emakhaya kangangoba abantu abadala kabasakwazi ukwabelana kahle nalo nezingane zabo njengoba sekuvetezwa isingisi ilanga liphuma lize liyoshona. Abakhulu bomnyango wethu babe sebebona ukuthi ukuze lolu lwimi oluyigungu kubantu ukuze lungashabalali kuhle ukuthi labo abanentshisekelo yokulilondoloza basondezwe ukubalekelela emsebenzini wabo wokucikoza ngosiba kusetshenziswa ulwimi lwethu lwesiZulu. Imincintiswano enjena siwumnyango siyeseka kakhulu ngoba kulapho sikwazi ukuseondela ngamandla eduze siziveze nathi siwumnyango,” usho kanje.